Iiholide + Imibhiyozo | January 2022
Iindleko Zangempela Zolungiso
Amagumbi Abantwana Amangalisayo
I-20 yeMbono yeZipho eziBalaseleyo- Izipho zoKwazisa ngokuCinga
Xa umntu okhethekileyo ehamba ngaphezulu nangaphaya ukuba enzele wena, iqinisekisa ngaphezulu kwenqaku lombulelo. Kulapho izipho ezicingisisiweyo zisebenza khona.
Umthi weKrisimesi okhulayo kunye noZinzileyo uzibeka phezulu
Nje ukuba ungene ngaphakathi, jonga njenge-850 enombala ombane we-LED ekhanyisa igumbi, njengoko amasebe eqala ukolula kancinci.
Ngomhla we-4 kaJulayi iMidlalo yeQela onokuyidlala ngaphandle- I-10 Patriotic yesine kaJulayi Imidlalo
Ukuba ubamba iqela le-4 kaJulayi kulo nyaka, cinga ngale mpembelelo yakho kwisitokhwe kwi-4 kaJulayi imidlalo yeqela, ukusuka kwipong kunye ne-cornhole ukuya kwi-Jenga enkulu kunye ne-Connect Four.
Izibane ezi-20 eziPhambili zangaphandle zeKrisimesi 2020-Izibane zangaphandle zomtya
Ezi zibane zangaphandle zeKrisimesi-ukusuka kwiibhalbhu zeC9 zeediliya ezimibalabala ukuya kwizibane ezilawulwa kude kude kunye nokukhanya komculo kubonisa isixhobo-ziya kwenza yonke imihla yeholide yakho ukuba ibe mnandi kwaye ikhanye.
41 'Ikhefu leKrisimesi' ucaphula zonke iiFani zeLampoon kaZwelonke
Ezi zicaphulo 'zeKhefu leKrisimesi' ziyamelana novavanyo lwexesha kwaye ziya kukunceda udlule kuloo mzuzu xa umzala wakho uEddie ehlasela ikhaya lakho.
Izipho ezi-22 zeKrisimesi eziBalaseleyo kuLonke uSapho- iiNtsingiselo zeZipho zoSapho
Yenza lonke usapho lonwabele ngesipho wonke umntu anokusixhamla. Ukusuka kwimidlalo nakwimisebenzi yobugcisa obenzelwe wena, abantwana kunye nabantu abadala ngokufanayo baya kuzixabisa ezi zipho zilungele usapho.
I-15 ye-Eva yoNyango oMnandi woNyaka oMtsha ngo-2020-Izihloko zePati zeNYE
Nokuba ufuna ukuya endle ngokuhombisa okanye uyigcine intle, sinezinto ezininzi zePati yoNyaka oMtsha yeengcinga kunye nemixholo engaphambili ye-bash yokugqibela.
Izipho zokubulela ezinomdla ezili-17 -Iimbono zeZipho zoMsitho zokuBulela
Ukususela kwiwayini kunye noshizi ukuya kwiincwadi kunye ne-cookware, nokuba ungayibhiyozela phi okanye nabani na umbulelo kulo nyaka, umamkeli weholide wakho uya kuzithanda ezi zipho.
Iingcamango ezi-15 eziPhambili zeSupp Bowl Party -Izihombiso zeQela leBhola ekhatywayo
I-Super Bowl LV ihamba ngeCawa, ngoFebruwari 7, 2021, ke gcina ezi zinto zokuhombisa zebhola imnandi kunye neqela leSuper Bowl ngaphambi komdlalo.
Izipho ezingama-21 zeKrisimesi eziBalaseleyo kubamelwane-Izipho zabamelwane ezingafikelelekiyo
Ukucwangcisa ukutshintshiselana ngesipho kunye nabamelwane bakho okanye ufuna nje ukulahla uphawu loxabiso lwakho? Ezi zipho zinobumelwane zilungele iiholide nangaphaya.
Iidolophu ezili-15 zeKrisimesi eziBalaseleyo e-United States
Ukuba usadinga indawo yokuhlala kwakho ebusika, cinga ngokundwendwela enye yeedolophu ezinomtsalane zeKrisimesi.
Izipho ezili-13 zoSuku lweGalentine zaBona bahlobo bakho baGqibeleleyo- Usuku lukaValentine Izipho zabahlobo
U-Leslie Knope angazamkela ezi zipho zoSuku lweGalentine, ezilungele ukubhiyozela usuku olungaphambi koSuku lweValentine kunye namanenekazi akhuthazayo: Abahlobo bakho abasenyongweni.
Imihombiso engama-25 yoNyaka oMtsha oLungileyo ka-Eva ngo-2021 ukuya ku-2021
Nantsi yonke imihombiso kunye nezinto ozifunayo zokuphosa itheko elimnandi kakhulu loNyaka oMtsha kulo nyaka, ukusuka kwiibhaluni zika-2021 ukuya kwi-confetti poppers.
Eyona Fama yoMthi yeKrisimesi ibalaseleyo kwilizwe ngalinye ngo-2020 - Eyona Fama yoMthi yeKrisimesi
Sifumene ezona fama zomthi weKrisimesi zibalaseleyo eMelika.
Iingcamango ezili-10 zokuTshintshiselana ngeZipho zabaHlobo, uSapho, kunye nabantu osebenza nabo
Ilungele abahlobo, usapho, abantu osebenza nabo kunye nabo bonke, ezi mbono zokutshintshiselana ngesipho seeholide (ngeposi kunye ne-IRL) ziqinisekisa ukuba wonke umntu ufumana isipho kwaye uyonwaba kwinkqubo.
Izipho ezingama-42 ezibalaseleyo zikaMakhulu ka-2021 - Izipho zeholide kaMakhulu
Ezi zipho, ezinokhetho olukhethwe nguwe kunye nesiko (kunye nentaphane yezipho ezingaphantsi kwe- $ 50) zilungele umakhulu wakho, nokuba ubhiyozela iiholide, usuku lokuzalwa kwakhe, uSuku loMama, okanye kungenxa yokuba.
I-23 Eyona Mihombiso mihle yoMthi weKrisimesi emhlophe 2020 -Izihombiso eziMhlophe zeKrisimesi
Ukusuka kwimithi yokufakelwa ukuya kwii-toppers, imihombiso, nangaphezulu, le mihombiso emhlophe emhlophe yomthi weKrisimesi iya kuqinisekisa ukuba unayo iKrisimesi emhlophe yamaphupha akho.
Ii-Albhamu zeKrisimesi ezi-20 eziGqwesileyo zeXesha lonke-ukuThengisa uMculo weKrisimesi weKhaya lakho
Ukusuka ku-Elvis ukuya kuMariah Carey, ngala ma-albhamu athengiswayo eKrisimesi angama-20 ekufuneka uwadlale ekhayeni lakho ngeli xesha leeholide.
Izipho ezili-12 eziGqwesileyo zoSuku lweValentine- Imibono yoSuku lweValentine yoSuku lweValentine
Yothusa abahlobo bakho ngezi zipho zoSuku lweValentine's ezimnandi, nokuba zizonke malunga nothando lwakho okanye bayayithiya ngoFebruwari 14.
Iintsingiselo zembala yePasika zichaziwe- Zithini imibala zePasika?
Funda iintsingiselo zokwenyani zemibala yePasika, ukusuka kobomvu nomhlophe ukuya kuluhlaza okwesibhakabhaka, omfusa, opinki nomhlophe.
indlela yokuhlela iofisi
ibhedi ebhedi yomntwana epholileyo
ifrench farrow grey kunye nebhola